म मनपर्ने जाडो लागि तयारी गर्न? तपाईं केहि नया, मूल चाहनुहुन्छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, स्वादिष्ट? त्यसपछि तपाईं अविश्वसनीय भाग्यशाली हो। यस लेखमा हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी तयार मेयोनेज संग कावीयार मज्जा को जाडो र टमाटर पेस्ट। केही जटिल। मुख्य कुरा आवश्यक सामाग्री मा शेयर र तयार गर्न केही समय छुट्याइएको छ। स्वादिष्ट नाश्ता प्रदान।
सँगै खाना पकाउने!
त्यसैले, मेयोनेज र टमाटर पेस्ट संग कावीयार मज्जा। यसको तयारी लागि यी तरकारी आवश्यक हुनेछ:
3 किलो zucchini।
गाजर को डेढ किलोग्राम।
प्याज को एक पाउन्ड।
प्रक्रिया को subtleties
का लुगा धुने zucchini को तयारी सुरु गरौँ र मध्यम आकार को टुक्रा मा उनलाई काट। स्यान्डपेपर आवश्यक हटाउन छैन।
अर्को, बोक्रा प्याज र सानो टुक्रा मा कटौती। मेरो गाजर, यो र कट सफा। सबै को सबै भन्दा राम्रो, यो सानो आकार कप छ भने। माथिको तरकारी को मासु Grinder मार्फत छोड्नुहोस्।
एक ठूलो पट लिन र उनको तरकारी ठूलो मा फैलियो। राम्ररी सँगै तिनीहरूलाई मिश्रण। अर्को तपाईं नुन, चिनी थप्न र फेरि हलचल गर्न आवश्यक छ। करिब आधा एक घण्टा तर्फ पैन तर्फ को तरकारी रस, त्यसपछि एक मध्यम आकारको आगो धारण गरौं सेट। जगाएर, फोडा वजन गर्न ल्याउन। तपाईं त गर्मी कम र2घण्टा लागि तरकारी simmer पर्छ। समय देखि हलचल गर्न समय भूल छैन।
यो समय पछि, को टमाटर को पेस्ट, मेयोनेज, मरिच, मसला, सिरका थप्न तल हलचल अप र आधा एक घण्टा थप बारेमा कुक ठाँउ।
यो समयमा, तपाईं जार जीवाणु रहित बनाउनु पर्दछ, र त्यसपछि आफ्नो कावीयार स्क्वास मा विस्तार। बैंकों अप रोल। ठंडा पछि, preform एक सुन्दर ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै पनि भोजन गर्न एउटा उत्कृष्ट appetizing खाना हुनेछ। साथै, त्यो पक्कै पनि तपाईंको अतिथि हुनेछ। खानपान!
अब तपाईं कसरी तयारी गर्न थाहा कावीयार मज्जा मेयोनेज र टमाटर पेस्ट र गाजर संग। हामी तपाईंको ध्यान गर्न तपाईं indifferent छोड्न हुनेछ अर्को रोचक नुस्खा ल्याउन। त्यसैले, मेयोनेज र टमाटर पेस्ट र लसुन संग कावीयार मज्जा। हामी पकाउने थाल्छन्।
आफ्नो औँलामा निम्न उत्पादनहरु हुन हो:
स्क्वास (कुनै पनि किसिम को) -3किलो।
गाजर को आधा किलो।
प्याज को नै राशि।
2-3 लसुन लौंग।
यो embodiment दुई preform तयारीमा। दुवै हेर।
ताकि तिनीहरूले पछि सजिलै एक मासु Grinder मा कटौती गर्न सकिन्छ राम्ररी सबै तरकारी धुन, सानो टुक्रा मा कटौती छील, तिनीहरूलाई हटाउन। परिणामस्वरूप ठूलो, एक पैन राख्नु छ, पाठ्यक्रम, टमाटर को पेस्ट थप्न, साथै मेयोनेज। राम्ररी सबै सामाग्री मिश्रण। स्टोभ मा पट ठाँउ, मध्यम गर्मी मा बारी र कहिले काँही जगाएर बारेमा एक घण्टा simmer। लसुन, नुन, चिनी, मरिच पाउडर, वनस्पति तेल, तेजपात: यस पछि, अन्य सामाग्री थप्नुहोस्। सबै मिश्रण राम्रो, गर्मी कम र एक वा बढी घण्टा simmer। अर्को, पहिले sterilized जार मा परिणामस्वरूप ठूलो खन्याउन। मेयोनेज र टमाटर को पेस्ट, र लसुन संग कावीयार मज्जा तयार छ। तपाईं जाडो लागि यो छोड्न सक्नुहुन्छ, र अब घरेलू वा अतिथि व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूको आनन्द आफ्नो पाक प्रतिभा प्रत्याभूति।
अब दोस्रो विधि बारेमा बताउनुहोस्। तपाईं नै सामाग्री आवश्यक हुनेछ। खुली, मेरो तरकारी, सूक्ष्मता कटौती, र त्यसपछि हल्कासित को टमाटर पेस्ट संग एक Skillet मा भुना। र त्यसपछि मात्र मासु Grinder मार्फत बित्दै। थप, सबै हामी अघिल्लो नुस्खा मा जस्तै गरिरहेका छन्। भन्न अनावश्यक, रोस्ट तरकारी spawn पनि अधिक appetizing बनाउन। त्यसैले यो कदम बेवास्ता छैन।
मेयोनेज र साथ कावीयार मज्जा को जाडो लागि टमाटर पेस्ट: एक नुस्खा अजवाइन संग
के तपाईं अजवाइन संग स्क्वास अन्डा पकाउन सक्नुहुन्छ भनेर थाह थियो? खैर, एक धेरै रोचक विकल्प, जो बस बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।
गाजर को एक जोडी।
अजवाइन - 1 टुक्रा।
तरकारी मेरो, सफा, टुक्रा मा कटौती। पैन ले, वनस्पति तेल, राख्न कटा zucchini, गाजर, अजवाइन मा खन्याउन। आधा सम्म भुट्नु।
हामी अर्को पैन, गहिरो आवश्यक हुनेछ। हामी, हाम्रो तरकारी मा बदलाव पानी, साथै नुन र तोरी थप्नुहोस्। सम्म पानी टाढा फोडे सम्म कम गर्मी मा हलचल तलना।
पकवान तयार बेला साग र डिल, सूक्ष्मता टुकडे करो धुन। जडीबुटी बस रुचाउने अघि एक खाजा गर्न आवश्यक संग छिडकना। सुन्दर स्वाद प्रत्याभूति। यो विकल्प तपाईं बैंकहरुमा रोल गर्न, तुरुन्तै पकाउने पछि तालिका मा पकवान सेवा जाँदैछन् घटनाको थप उपयुक्त तयारी छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
multivarka मा पनि सम्भव छ!
तपाईं Multivarki को खुसी मालिक हुनुहुन्छ? यो उपकरण बिना तपाईं खाना पकाउने गर्न सक्नुहुन्छ? सुन्दर! त्यसपछि आज हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी multivarka मा स्क्वास कावीयार मेयोनेज र टमाटर पेस्ट तयार। बस यो प्लेट मा भन्दा धेरै सजिलो र छरितो छ भन्छन्।
हामी यी सामाग्री आवश्यक हुनेछ:
Courgettes -3किलो।
प्याज - आधा किलो।
लसुन - केही ठूलो दाँत।
पहिलो कुरा तपाईं zucchini गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई धुन, खुली, मध्यम आकार को स्लाइस मा कटौती। पनि प्याज सफा र टुक्रा मा कटौती। हामी बोक्रा लसुन को छुटकारा प्राप्त। यो कटौती गर्न सकिन्छ। तरकारी त हामी multivarochnuyu कचौरा तिनीहरूलाई पारी Mince। , नुन को2चमचा फिर्ता पोख्नुहोस् सामाग्री सूर्यमुखी तेल खन्याउन। सबै ध्यान मिश्रण।
अब तपाईं ढक्कन Multivarki "Quenching" मोड (समय 2:00) बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, चयन गर्नुहोस्। मात्र 60 मिनेट - Multivarki-कुकर लागि समय कम लाग्छ।
तोकिएको समय बित्दै, संकेत को मद्दतले तयारी यस चरण को अन्त बारेमा सूचित multvarka। , को तरकारी मिश्रण मा, उपकरण को आवरण खोल्नुहोस् मेयोनेज, टमाटर को पेस्ट र चीनी थप्नुहोस्। बिस्तारै र राम्ररी scapula मिश्रण।
त्यसपछि तपाईं (30 मिनेट) फेरि समय सेट गर्न र ढक्कन Multivarki बन्द गर्न आवश्यक छ। आधा एक घण्टा को अन्त मा, खोल्न यो सिरका (1 चम्मच) थप्नुहोस्। हलचल गर्न नबिर्सनुहोला। 10 मिनेट लागि थप "हीटिंग" मोड मा पकवान छोड्नुहोस्। कि पछि तपाईं sterilized जार यसलाई राख्नु वा अब मसालेदार स्वाद आनन्द उठाउन सक्छौं। विकल्प तपाईंको हो!
के पेश गर्न?
हामी स्क्वास कावीयार मेयोनेज र टमाटर पेस्ट कसरी तयार गर्न विभिन्न व्यञ्जनहरु, साझेदारी। अब यो तालिका ल्याउन सक्छ बारेमा केही शब्द। यो आलु puree, चाउचाउ वा porridge लागि एक अद्भुत garnish छ। यो पनि गर्दछ र यस्ता meatballs वा ग्रील्ड sausages रूपमा मासु व्यञ्जन। त्यहाँ क्षणमा मामला मा अर्को विकल्प छ, त्यहाँ केही छ फ्रिज मा स्क्वास कावीयार बाहेक - तपाईं hlebushek यसलाई फैलाउन सक्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईं र तपाईंको परिवारलाई सदस्य यो मन हुनेछ!
आफ्नो खानाको आनन्द लिनुहोस्! को जाडो लागि तयारी स्वादिष्ट प्राप्त गर्दै गरौं र आफ्नो परिवार प्रसन्न!
गरेको Chebureki कसरी पकाउन सिक्न गरौं
कसरी खरायो खाना पकाउनु
एक गोप्य संग पिज्जा - "Calzone"
प्रक्रिया को रहस्य: घर मा ससेज कसरी बनाउने
Yevpatoria: "समुद्र" - परिवारको लागि स्वास्थ्य रिसोर्ट
Accreditation - यो के हो? लाइसेन्स र accreditation
Ponty - यी गलत छविको तत्व हो
तीतो सुन्तला - त्यो छ, एक पशु वा बोट?
होटल "Gelendzhik खाडी।" Gelendzhik, आराम: मूल्यहरु
Semuzhny राजदूत माछा व्यञ्जनहरु
प्रतियोगिता "सुरक्षित व्हील"
तिनीहरूले राम्रो भयो कि फिड Melons र तरबूज,
Rollo मई - एक चिरपरिचित अमेरिकी मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सक